Ikholeji yaseVassar: I-GPA, izikolo ze-SAT kunye ne-ACT Scores
I-Vassar College ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph
I-Vassar College i-GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Ukwazisa ukungena. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Ulinganisa njani kwiKholeji yaseVassar?
Ingxoxo yeMigangatho yokuVunywa kweVassar:
I-Vassar College iyona yekholeji ye-liberal yekholeji eyamkela i-quarterly of all applicants. Ukuze ungene, uzakufuna amabanga aphakamileyo aphakamileyo kunye neemvavanyo zokulinganisa ezilinganiselweyo ezingaphezulu kwesilinganiso. Kwigrafu ngasentla, amachashaza ahlaza okwesibhakabhaka kunye aluhlaza amelela abafundi abamkelekileyo. Uyabona ukuba uninzi lwabafakizicelo abaphumeleleyo banamanani aphakamileyo esikolweni "A-" okanye ngaphezulu, ahlanganiselwe izikolo ze-SAT ezi-1300 okanye ngaphezulu, kunye nemigangatho ye-ACT engama-28 okanye ngaphezulu. Abafaki zicelo abaninzi banamanqaku ama-4.0 GPA anomangalisayo.
Amabakala amahle kwaye amanqaku okuvavanya yedwa, ke, akayi kufumana u-Vassar. Uza kuqaphela amanqaku ambalwa ebomvu (abafundi abatshitshisiweyo) kunye namachashaza aphuzi (abafundi abadibeneyo) abafakwe kwi-green and blue kwigrafu. Abafaki-zicelo abaninzi babenamabanga kwaye amanqaku okuvavanya ayejoliswe kwiVassar College ayengavumelekanga. Okuchaseneyo kunjalo - abanye abafundi bamkelwe ngamanqaku okuvavanya kunye namabakala ambalwa ngaphantsi kwesiqhelo. Oku kungenxa yokuba inkqubo yokumkelwa kukaVassar isekelwe kwiinkcukacha ezingaphezu kwexabiso. Ikholeji isebenzisa isicelo esiqhelekileyo kwaye idibeneyo ngokupheleleyo . Ikholeji iya kukhangela ubuchule bokufunda ezikolweni zakho eziphakamileyo , kungekhona kuphela amabakala akho. Kwakhona, baya kukhangela isicatshulwa esiphumeleleyo , imisebenzi enomdla ngokukhawuleza, impendulo emfutshane , kunye neencwadi ezinamandla zokucebisa . Abafundi banokuqinisa ngakumbi izicelo zabo ngokubhala isicatshulwa esongezelelweyo esicacileyo kunye nesinyanzelo kwi-Vassar yokongeza kwisicelo esiqhelekileyo. I-Vassar inikezela udliwano-ndlebe olukhethiweyo, kodwa ezi zivandlakanyo njengenxalenye yenkqubo yokwamkelwa.
Ukuba unento enye ongathanda ukwabelana ngayo neVassar (inkondlo, umzobo, ividiyo), ungasebenzisa inketho ye "kholeji yakho" kwikholeji kwisicelo. Oku kunokwenzeka ukuba kube yinzuzo yakho xa kukho ubungakanani buntu bakho kunye neminqweno engazange ifakwe kuyo yonke indawo yesicelo. Kwakhona, khumbula ukuba iVassar inokukhetha ukhetho lokuqala, kwaye ukusetyenziswa kwangaphambili kunokuphucula amathuba akho yokwamkela.
Ukuze ufunde kabanzi malunga neKholeji yaseVassar, ii-GPA zezikolo eziphakamileyo, izikolo ze-SAT kunye nama-ACT, amanqaku angancedisa:
Iprofayili ye-Admissions yeKholeji yaseVassar
Ukuba Uthanda i-Vassar College, Qinisekisa ukuba Hlola ezinye Ezi zikolo:
Amanqaku afana neVassar College:
Iikholeji zobuGcisa boLwazi oluMkhulu ngakumbi
Sebenzisa iiNgoma zeNgoma (kunye neCaution) Ukufundisa amanani eNtetho
Vote - ukuVotela